4 Waxyaabaha aad sameyn lahayd marka aad ka iPhone New 7 / 7s Delete Data Muhiim ah
Dhaco tirka files muhiim ah oo ku saabsan iPhone noqon kartaa arrin niyad gaar ahaan marka aad wax fikrad ah waxa la sameeyo si ay dib-u helin. Kuwa soo socda xal afar talaabo caawin kara sidii aad u hesho xog muhiim ah in aad si fudud waa in.
1. Jooji Isticmaalka iPhone7 / iPhone 7s
Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay in la sameeyo la joogo aad aragto aad ayaa laga badiyay xogta muhiimka ah waa in ay isla markiiba joojiso isticmaalka aad iPhone. Sababta ugu weyn ee sababta aad u rabto in aad joojiso qaadashada iPhone 7 isla markiiba waxaa ugu wacan in aadan rabin in xogta cusub ee la abuuray in ay overwrite xogta lumay. Haddii ay taasi dhacdo waxaa laga yaabaa in aysan macquul aheyn inay soo kabsadaan xogta lumay .
2. Hubi Lugood aad gurmad content si loo arko haddii xogta ku jirto
Tallaabada xigta waa inuu hubiyo wax gurmad Lugood si ay u arkaan haddii macluumaadka lumay jiro. Dhibaatada ugu wayn ee aad doonaysid in aad halkan kala kulmaan waa in Apple ma ogola in aad si aad u eegto macluumaadka waa in aad gurmad Lugood. Waxaad go'aansan lahaa in la soo celiyo xogta oo dhan, waxaana ay rajeynayaan in xogta lumay waxaa jiri doona laakiin waxaan ku khasbannahay in aad ka digaya in tallaabadaas tahay masixi doono wax walba oo ku saabsan iPhone 7/7 oo lagu daray.
Nasiib wanaag, waxa jira codsi in uu ogolaan kartaa in aad aragto files ku saabsan gurmad Lugood. Wondershare Dr. Fone kuu ogolaanaya in aad si aad u hesho liiska faahfaahsan oo dhan xogta laga heli karaa Lugood aad dib. Qaar ka mid ah muuqaalada Wondershare Dr. Fone waxaad ka heli doontaa waxtar leh waxaa ka mid ah:
Suurto gashay in aad ka bogsato oo dhan xogta ay ka mid yihiin fariimaha tirtiray, xiriirada, sawiro, videos iyo faylasha kale ka qalab macruufka
Waa ay fududahay in la isticmaalo sida aynu wax yar ka arki doonaan
Kuu ogolaanaya in aad doorato oo aydan xaraysan aad jeclaan lahayd inay ka soo kabsadaan
Hagaajin karaa nidaamka qalliinka ee qalabka macruufka ah.
Talaabada 1: filayaa, in aad soo download lagu rakibay Dr. Fone si aad u computer, ordo barnaamijka. Guji "kabsado Lugood." Codsiga waxaa lagu ogaan doonaa oo dhan oo ka mid ah gurmad files heli karaa inaad qabto. Guji mid ka mid ah aad rabto in aad ku salaysan taariikhda la abuuray waxaa la. Waxaa haboon in la doorto gurmad la soo dhaafay ka hor inta aadan badiyay xogta aad.
Talaabada 2: Dooro Lugood gurmad file ah in ay u badan tahay in ay ku jiraan xogta aad laga badiyay ka dibna riix ku saabsan habka iskaanka ayaa qaata in muddo ah si samir "Start Scan.".
File ayaa kaabta la soo saaro doonaa oo dhan xogta soo bandhigay qaybaha. Markaas waxaad ka hubsan kartaa in xogta aad laga badiyay waa in faylka.
3. Waxa kale oo aad eegi kartaa haddii aad Data waa in aad gurmad iCloud
Waxa kale oo aad eegi kartaa haddii xogta aad idinku dhex jiro iCloud gurmad file. Dhibaatada waxa ay tahay, waxaa aad u adag in aad u aragto macluumaadka oo dhan aad iCloud dib mar kale iyo haddii aad isku daydo in ay soo celiso, waxaana ay rajeynayaan waa dhan waxaa, aad masixi laga yaabaa in dhammaan xogta ku saabsan iPhone.
Wondershare Dr. Fone kaa caawin kara inaad eegto aad gurmad iCloud si aad u hesho xogta aad. Raac tallaabooyinkan fudud in ay sidaa sameeyaan.
Talaabada 1: ". kabsado iCloud files ee kaabta" ka dib markii socda Dr. Fone, dooro Waxaad la keeneen in doonaa inuu soo galo username iyo password iCloud sida image hoose.
Talaabada 2: mar aad ku gasho, waxaad awoodi doontaa in aad aragto oo dhan iCloud files gurmad. Dooro mid ka mid ah aad u malaynayso jiraan xogta aad tirtiray oo guji "Download."
Talaabada 3: suuqa kala gujisid A idiin muuqan doonaa dhammaan xogta la heli karo in iCloud gurmad faylka aad soo bixi. Dooro nooca file aad jeclaan lahayd inaad iskaan ah. File ayaa aad doorato ku xirnaan doontaa nooca xogta aad laga badiyay. Tusaale ahaan, haddii aad laga badiyay fariimaha, waxaad dooran doonaa "fariimaha iyo Wac abuse."
Talaabada 4 : Marka scan la dhammeeyo, waxaad awoodi doontaa inaad si ay u arkaan dhammaan xogta ku jirta qeybta in oo aad si fudud ku hubin kartaa haddii aad xogta lumay waa dhex joogaa iyaga.
4. Ladnaansho Data tirtiray ah
Sida iska cad haddii aad ka heli kartaa macluumaadka la tirtiro on Lugood aad ee gurmad iCloud midkood, waxaad si fudud u soo celin karo files iyo sidoo noqon doonaa. Haddii aad si kastaba ha ahaatee ma ka heli kartaa macluumaadka ku saabsan mid ka mid ah hayaan, waxaad weli soo kaban karto xogta la isticmaalayo Wondershare Dr. Fone. Halkan sida.
Talaabada 1: Orod Wondershare Dr. Fone iyo xiriiriyaan iPhone si aad u computer. Codsiga waxaa lagu ogaan doonaa telefoonka. Door "kabsado Device macruufka" Riix Start Scan. m
Talaabada 2: Dr. Fone iskaan doonaa qalab aad. Habka ay qaadato waqti si fadlan samir.
Tallaabada 3: Marka scan la dhammeeyo, xogta oo dhan loo qaybaha ku qoran doonaa. Halkan waxa aad ku eegaan karo xogta iyo go'aan ka gaarto waxa aad jeclaan lahayd inay ka soo kabsadaan. Waxa kale oo aad kala shaandhayso karaa natiijada in ay muujiyaan content kaliya tirtiray doorataa "bandhigaan waxyaabaha tirtiray oo keliya."
Marka aad ka heli faylasha tirtiray, guji oo kaliya "Ladnaansho" iyaga badbaadiya, si aad u computer.
Siduu u formatted Memory Card Recovery
Top 15 Video converters u Mac OS X EL Capitan
System soo celin - Ma System soo celin tirto faylasha?
Sidee inuu ka soo kabsado Photos ka Camera Canon EOS 6D
SanDisk Flash Drive Recovery: 3 Talaabada inuu ka soo kabsado Xogta laga Sandisk Flash Drive
Waxay muhim M4 Data Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga muhim M4 SSD
Toshiba Data Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Laptop Toshiba
Nexus 7 Data Recovery: Ladnaansho Nexus 7 Photos / Videos / Music fudayd
> Resource > Ladnaansho > 4 Waxyaabaha aad sameyn lahayd marka aad ka iPhone New 7 / 7s Delete Data Muhiim ah